रोमानिया स्वीट्जरल्याण्डबाट अंक खोस्ला ?
२०७३ असार १ बुधबार, काठमाडौं । युरोकप फुटबलमा स्वीट्जरल्याण्ड र रोमानियाबीचको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ । यद्यपि, स्वीट्जरल्याण्डले अल्बानियालाई हराएको उत्साहले रोमानियाविरुद्ध सशक्त प्रदर्शनको प्रयास गर्ने छ । खेलाडीका हिसावले दुवै टोलीमा तेजिला फवार्ड छन् । रोमानिया अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि संयमित भई अंक खोस्न चाहन्छ । रोमानिया पाँचौ पटक युरोकप खेल्दै गरेको रोमानिया यो युरोकपको पहिलो खेलमा आयोजक फ्रान्स सग २–१ गोल अन्तरले पराजोत हुन पु ... बाँकी अंश»
अल्बानिया फ्रान्सलाई रोक्नै पर्ने दबाबमा
२०७३ असार १ बुधबार, काठमाडौं । पहिलो पटक युरोकप फुटबलमा सहभागि भएको अल्बानिया समूहको आफ्नो दोस्रो खेलमा आयोजक फ्रान्ससंग खेल्दै छ । राति पौने १ बजे हुने खेलमा फ्रान्स लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दै समूह विजेता बन्दै दोस्रो चरण पुग्ने दाउँमा छ भने, यसपटक समूहको तेस्रो स्थानमा रहने टोली समेत अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न पाउने अवसरको फाइदा उठाउन अल्बानिया संयमित भएर फ्रान्सलाई रोक्ने प्रयास गर्ने छ । अबका खेलमा प्रत्येक टोलीले गोल अन्तर भन्दा पनि अंकलाई ध्यान दिएर खेल् ... बाँकी अंश»
रसिया-स्लोभाकिया, दुवैका आँखा तीन अंकमा
२०७३ असार १ बुधबार, काठमाडौं। युरो २०१६को पहिलो खेलमा रसियाले ईङल्याण्डसँग बराबरी छ भने स्लोभाकिया वेल्ससँग पराजित भएको थियो। रसियाले ईङल्याण्डसँगको केलमा अन्तिम समयमा गरेको गोलले १ अंक प्राप्त गरेको छ भने स्लोभाकिया अंक बिहिन रहेको छ। नेपाली समय अनुसार बुधबार साँझ ६:४५ बजे रसिया र स्लोभाकिया एक अर्कासँग भिड्दैछन्। दुवै टोली आजको प्रतिस्पर्धामा अंक ल्याउने दाउमा हुने छन्। रसियाले ३ अंक जोडे दोस्रो चरण प्रवेशकालागि सजिलो हुने हुँदा जितकालागि खेल्ने छ। ... बाँकी अंश»
कोपा अमेरिका: पहिलो चरणका खेल सकियो, क्वार्टरफाईनल शुक्रबारदेखि
२०७३ असार १ बुधबार, काठमाडौं। समुह चरणको अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई र चिलीले पनामालाई हराएका छन्। अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई ३-०ले हराउँदै समुह बिजेता बनेको छ। अर्जेन्टिनाले समुह चरणको तीनै खेल जित्दै स्पष्ट ९ अंकका साथ क्वार्ट्रफाईनल प्रवेश गरेको हो। त्यसैगरि चिलीले पनामालाई ४-२ गोलले हराउँदै समुहको उपबिजेता हुँदै क्वार्टरफाईनल प्रवेश गरेको हो। चिलीको जितमा एलेक्सी सान्चेजले २ तथा एडिवार्डो भारगासले २ गोल गरेका थिए। समुह चरणको खेल ... बाँकी अंश»
डुंगा ब्राजिलको राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षबाट बर्खास्त
२०७३ असार १ बुधबार, एजेन्सी । ब्राजिलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक डुंगा बर्खास्त भएका छन् । ब्राजिल अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि फुटबल संघले प्रशिक्षक डुंगालाई बर्खास्त गरेको घोषणा गरेको हो । ५२ वर्षीय बज्रिलियन डुंगा राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकका रुपमा बर्खास्त भएको यो दोस्रो पटक हो । सन् २०१४ मा भएको विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७–१ को फराकिलो अन्तरले पराजित भएपछि प्रशिक्षक लुइस फेलिप स्कोलरी ... बाँकी अंश»
नवप्रवेशी आईसल्याण्डसँग पोर्चुगलले अंक बाँड्यो
२०७३ असार १ बुधबार, काठमाडौं। फ्रान्समा जारी युरो-२०१६ फुटबलको समुह 'एफ'मा पोर्चुगल र आईसलयण्डको खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएको छ। आइसल्याण्ड पोर्चुगललाई रोक्दै अंक बाँडन सफल भएको हो। खेलको ३१औं मिनेटमा पोर्चुगलका नानीले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो पटक युरो खेलीरहेको आइस्लयाण्डले पोर्चुगलको आक्रमण लाई निस्तेज पारेको थियो। खेलको ५५औं मिनेटमा आइसल्याण्डका विर्किर जार्नासनले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्‍याएका थिए। छनौट चरणमा न ... बाँकी अंश»
अष्ट्रियालाइ स्तब्ध पार्दै हंगेरीले लग्यो तीन अंक
२०७३ जेठ ३२ मंगलबार, काठमाडौं। फ्रान्समा जारी युरो २०१६मा तुलनात्मक रुपमा बलियो मानिएको अष्ट्रियालाई हंगेरीले पराजित गर्दै सुखद शुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेल जित्दै हंगेरीले स्पष्ट ३ अंक प्राप्त गरेको छ। खेलको ६३औं मिनेटमा एदम जलाईले गोल गर्दै हंगेरीलाई अग्रता दिलाएका थिए भने १० जनामा समेटिएको अष्ट्रियाले आक्रमक खेल खेल्दा ८७औं मिनेटमा काउण्टर प्रहारमा जोटान स्टाईबरले दोस्रो गोल गरेका थिए। अष्ट्रियाका एलेक्जेण्डर ड्रागोविचले ६६औं मिनेटमा दोस्रो पहे ... बाँकी अंश»
पोर्चुगललाई रोक्न आईसल्याण्डलाई रोनाल्डो रोक्नु पर्ने चुनौती
२०७३ जेठ ३२ मंगलबार, काठमाडौं। समुह 'एफ' अन्तर्गतको दोस्रो खेल अन्तर्गत आज हुने खेलमा आसल्याण्डले प्रतियोगोता कै बलियो मानिएको पोर्चुगलको सामना गर्दैछ।पोर्चुगल आजको खेलमा आइसल्याण्ड विरुद्द जित हात पार्दै आफ्नो सुखद युरो यात्रा अघि बढाउने तरखरमा हुनेछ भने आइसल्याण्ड पोर्चुगललाई कम्तिमा बराबरीमा रोक्ने दाउमा रहेको छ। आईसल्याण्डलाई पोर्चुगल रोक्न स्टार खेलाडी रोनाल्डोलाई रोक्नु पर्ने ठूलो चुनौती हुनेछ। रोनाल्डोलाई रोक्न सके आईसल्याण्डले ... बाँकी अंश»
छनौटमा अपराजित अष्ट्रियाले हँगेरीलाई गाह्रो पार्ने !
२०७३ जेठ ३२ मंगलबार, काठमाडौं। फ्रान्समा जारि युरो २०१६ अन्तर्गत समुह 'एफ'को पहिलो खेल अष्ट्रिया र हंगेरी बिच नेपाली समय अनुसार मंगलबार साँझ ९:४५मा हुँदैछ। छनौट समुहमा अपराजित अष्ट्रियाको समाना गर्न हंगेरीलाइ गाह्रो हुने अनुमान फुटबल बिश्लेषकहरुले गरेका छन्। अष्ट्रियाले युरो छनौटमा जस्तो खेल पस्केको खण्डमा युरो २०१६को पनि दाबेदार हुन सक्ने छ। तर ठूला प्रतियोगिताहरुमा मानसिक दवाब झेल्न सक्ने र दवाब भन्दा माथि उठेर प्रदर्शन गर्ने टोलीहरु नै सफल हुने गरेको ... बाँकी अंश»
मेक्सिको र भेनेजुएलाले अंक बाँडे, उरुग्वेको अन्तिम खेलमा पहिलो जित
२०७३ जेठ ३२ मंगलबार, काठमाडौं। अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह 'सी' को अन्तिम खेलमा मेक्सिको र भेनेजुएलाले १-१ गोल गर्दै बराबरीमा खेल सकाएका छन्। त्यसैगरि उरुग्वेले जमैकालाई ३-० गोलले पराजित गरेको छ। एक खेल बाँकी हुँदै दोस्रो चरण प्रवेश गरिसकेका मेक्सिको र भेनेजुएला समुह बिजेता बन्नकालागि खेलेका थिए। खेलको १०औं मिनेटमा जोसेभेलाजक्वेजले गोल गर्दै भेनेजुएलालाई अग्रता दिलाएका थिए। दुवै पक्षले लगातार आक्रमण गरिरहेता पनि थप गोल ह ... बाँकी अंश»
बेल्जियममाथि ईटलीको प्रभावशाली जित
२०७३ जेठ ३२ मंगलबार, काठमाडौं। फ्रान्समा जारी युरो २०१६ अन्तर्गत समुह 'ई'को बेल्जियम र ईटली बिचको खेलमा ईटली २-० गोलले बिजयी भएको छ। बेल्जियम माथि अप्रत्यासित जीत हासिल गर्दै ईटलीले स्पष्ट ३ अंक आर्जन गरेको छ। खेलको ३२औं मिनेटमा इमानुएल जाकेरिनीले गोल गर्दै ईटलीलाई अग्रता दिलाएका थिए भने ९०औं मिनेटमा ग्राजियानो पेलेले गोल गर्दै बलियो बेल्जियम माथिको जित सुनिश्चित गरेका थिए। खेल अवधिभर बेल्जियमले बलमा नियन्त्रण राखे पनि गोल गर्न नसक्दा ईटलीले ... बाँकी अंश»